Umgangatho ophezulu wokucoca ipetroli yedizili ye-MTU injini yedizili
Inani le-OEM TF2096 Ibeka endaweni yeMAN: WDK 11 102 / 10MTU: X00042421SDMO: 330510035 FG0708 Isicelo se-MTU 4000 injini yedizili Ububanzi beDayamitha yoMzimba: 108.6mm Ukuphakama: 260mmUbukhulu bomtya: M32 * 1.5 Inkcazo ye-Fuel filter Mack yeTraki, itrektara, i-trailer, i-excavator, Ubungakanani bemoto i-OEM Iimpawu ezikumgangatho ukhusela i-injini yakho kubutyobo obuyingozi. Icebo lokucoca amafutha lisusa ukungcola kunye nomhlwa osuka kumafutha, uzigcine zingangeni kwiinjini kwaye zenze umonakalo. Izinto eziPhakathi zeMelika HV ...
Amaloli eNtsimbi amatsha ajikelezayo kwi-Fuel Filter Element
Ukubaluleka kokuNcitshiswa kwe-Fuel Ngelixa ipetroli idizili ingamandla e-injini, ikwaqhuba nezinye iindima eziphambili: • Ukupholisa - ngokujikeleza inkqubo yenaliti kunye nokufunxa ubushushu obungafunekiyo. • Ukucoca - ngokudlulisela ukungcola kwiFuel Filter (s), apho zisuswe khona Ungcoliseko lwepetroli - olona tshaba lukhulu Iintshaba zepetroli yile: • Ukungcola nentlenga - xa kufakwa ...
Isihluzi se-Fuel ye-Fuel ye-Fuel
Ukubaluleka kokuNcitshiswa kwe-Fuel Ngelixa ipetroli idizili ingamandla e-injini, ikwaqhuba nezinye iindima eziphambili: • Ukupholisa - ngokujikeleza inkqubo yenaliti kunye nokufunxa ubushushu obungafunekiyo. • Ukucoca - ngokudlulisela ukungcola kwi-Fuel Filter (s), apho zisuswa khona kwiNombolo ye-OEM TF0203 (TF2041) ithatha indawo yeSAKURA: FC-1008FLEETGUARD: FF5375DONALDSON: P502233Imvolongo: MB-CX5102NISSA ...